NJEHIE "0X80070035 - NETWỌK ỤZỌ AHỤGHỊ" NA WINDOWS 10 - WINDOWS - 2019
Dozie njehie "Achọghị ụzọ netwọk" na koodu 0x80070035 na Windows 10
FotoFusion bụ usoro mmemme nke na-enyere ndị ọrụ aka ịmepụta onwe ha foto na ọrụ ndị ọzọ iji ihe oyiyi. Ị nwere ike ịmepụta magazin, akwụkwọ mpịakọta na ọbụna kalenda. Ka anyị lebakwuo anya na ngwanrọ a.
Ndị mmepe na-enye nhọrọ nke nhọrọ dị iche iche. Ụdị dị mfe maka ịmepụta ọkpụkpọ site na ncha, ị ga-agbakwunye ihe oyiyi onwe gị na hazie ibe. Mmetụta akụrụngwa ga-aba uru nye ndị na-achọghị iji oge dị ukwuu na -emepụta slides, na-agbakwụnye ma na-edezi foto, dị mkpa ka ịhọrọ ihe oyiyi, usoro ihe omume ahụ ga-eme nke fọdụrụ. Ụdị nke atọ nke ọrụ bụ template. Ọ ga-adịrị ezigbo ndị ọrụ niile, ebe ọ bụ na e nwere otutu ohere n'ime ya nke ga-eme ka usoro nke mejupụta album ahụ dị mfe.
E nwere ọtụtụ ụdị ọrụ na ndebiri - ezumike albums, foto, kaadị, kaadị azụmahịa, akwụkwọ ịkpọ òkù na kalenda. Ụdị dịgasị iche iche na-eme ka usoro ihe omume ahụ dịkwuo mma. Ohere niile dịlarị na mbipụta FotoFusion.
Ndị mmepe ahụ akwụsịghị n'ụdị ọrụ ndị ahụ ma gbakwunye onye ọ bụla. Tụlee ha banyere ihe atụ nke ọba agbamakwụkwọ. Ntọala dị iche na ọnụ ọgụgụ nke ibe, ndokwa nke foto na nhazi zuru ezu, nke bara uru ịṅa ntị mgbe ị na-ahọrọ template. Ịhọrọ kalenda ma ọ bụ ihe ọzọ, onye ọrụ ahụ ga-enwetakwa nhọrọ nke nhọrọ dị iche iche, dịka n'akwụkwọ agbamakwụkwọ.
Ọnụ ọgụgụ nke foto na nha ha dabere n'ụdị ibe. N'ihi nke a, ị na-ahọrọ otu n'ime ndebiri ahụ, onye ọrụ ahụ agaghị enwe ike ịkọwa ọkwa ụfọdụ, ebe ọ bụ na ọ dabaghị ọrụ a. A na-emejupụta windo nhọrọ ahụ n'ụzọ dị mfe, a na-egosiputa akụkụ nke peeji ndị ahụ ma nwee ihuenyo ha.
Ị nwere ike bulite ihe oyiyi n'ọtụtụ ụzọ - naanị site na ịdọrọ gaa na Wọkspeesi ma ọ bụ site n'ịchọ ihe omume ahụ n'onwe ya. Ọ bụrụ na ịchọta ihe ọ bụla dị mma, mgbe ahụ, ọ bara uru ịkọwa iche maka ịchọ. Ọ na-enye gị ohere nyochaa faịlụ, ezipụta ngalaba na nchekwa maka ọchụchọ ma jiri ọtụtụ nkata nke achọtara ihe oyiyi.
Na-arụ ọrụ na ihe oyiyi
Mgbe a kpaliri foto ahụ na Wọkspeesi, a na-egosipụta obere ngwá ọrụ. Site na ya, onye ọrụ ahụ nwere ike ịgbakwunye ederede, gbanwee ihe osise, ọrụ na ọkwa na mgbazi agba.
A na-emezi mmezi agbazi oyiyi ahụ site na windo dị iche, ebe a na-edozi ụcha ruru, ma gbanwee ihe dị iche iche. A ga-eme ihe ọ bụla ozugbo, a ga-ehichapụ ya site na ịpị igodo Nchikota Ctrl + Z.
E nwere ike ịtọ ọnọdụ nke foto ahụ ma ọ bụ iji aka ya rụọ ọrụ. O nwere ụzọ atọ dị iche iche nke ị nwere ike ịtọ ntọala maka nhazi ihe oyiyi na ibe.
Panel na ngwa ngwa
A na-etinye akụkụ ụfọdụ n'ime otu nhọrọ, nke na-ekewa n'ime taabụ. Ọ na-edozi ala, peeji nke, mmetụta, ederede na n'ígwé. Window n'onwe ya na-agagharị na mpaghara ọrụ dum ma gbanwee nha, nke bụ nnukwu uru, ebe ọ bụla onye ọrụ ga-enwe ike ịhazi ndokwa na ebe kwesịrị ekwesị.
Na-arụ ọrụ na ibe
Ịpị na bọtịnụ kwekọrọ na windo ahụ mepee taabụ na ọkpụkpọ ọkpụkpọ. Ọ na-egosiputa ha vidiyo na ọnọdụ. Tụkwasị na nke a, atụmatụ a ga-enyere gị aka ịgafe ngwa ngwa n'etiti slides na-enweghị eji akụ ọkọlọtọ.
Ịchekwa ọrụ ahụ
Ịchekwa ọrụ a na-emetụta ihe dị mma. Ọ bụ usoro a nke na-akwado usoro ihe omume ahụ iji lekwasị anya na ọrụ na-adịgide adịgide na ịmepụta ọtụtụ ọrụ. Na mgbakwunye na ịhọrọ ebe ịchekwa na aha, onye ọrụ nwere ike ịgbakwunye isiokwu na ọchụchọ ahụ, dee isiokwu ahụ ma gbasaa album ahụ.
Ntugharị dị mfe na nke a na-adịghị ahụkebe;
Ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndebiri na blanks;
Ọrụ nchọta na-aga.
A na-ekesa usoro a maka ego;
Nyocha a na-abịa na njedebe. N'ịkọ elu, m ga-achọ ịma na FotoFusion bụ usoro magburu onwe ya nke na-elekwasị anya ọ bụghị nanị na e mepụtara foto foto. Ọ bara uru maka ndị ọrụ ahụmahụ na ndị bidoro. Ụdị zuru oke ahụ bara uru maka ego ahụ, mana jide n'aka na ị nwale ule ikpe ahụ tupu ịzụta.
Gbaa ụdị mbipụta nke FotoFusion
Nchịkọta foto software Pics Bipute Onye na-eme ihe nkiri Dg Foto Art Gold
FotoFusion bụ mmemme zuru ụwa ọnụ nke ga-enyere gị aka ịmepụta ọtụtụ ọrụ dị iche iche site na iji foto. Kalenda, foto foto, kaadị na ọtụtụ ndị ọzọ abanyelarịrị na mbipute ikpe ahụ.
Onye Mmepụta: Lumapix
Ọnụ: $ 200